Daabacaha Dijital ah, Daabacaha UV Iyo Soosaaraha Daabacaha Dtg | Diirad saarid
Diirad saar, Dhamaan qiimaha macaamiisha.
Mashiinka Daaweynta Hore
Feejignow Inc. Totials Videos ee Nebulas-62f
Feejignow Inc. Tourials Videos ee Daabacayaasha A3 DTG 3350
Feejignow Inc. Tourials Videos for a3 daabacadaha UV 3350
Feejignow Inc. Tourials Videos for a2 dtg oo daabacan 6040
Feejignow Inc. Tourials Videos for a2 uvints uvders 6040
Fool diirada ah in Inc. Tourials Videos ee daabacadaha UV ee 6090
Feejignow Inc. Totials Videos ee Atlas-1311
Feejignow Inc. Totials Videos ee Nebulas-35f
Bandhig muujinaya diiradda Inc.
Muunad daabacan oo ay soo saaraan daabacayaasha UV
Muunad daabacaadda daabacaada DTG
Muunad daabacan oo ay sameeyaan daabacayaasha DTF
Diirada saar, Diyaar u ah in la daabaco.
2 In1 iyo 4 in 1 t shaati shaati oo ay diiradda saaraan A2 dtg printer digsiyeynta& Soo-saareyaasha | Diirada saar Inc.
Waxaa loogu talagalay in ay xitaa fududaato in la shaqeeyo, in la bixiyo xitaa xawaaraha heerka wax soo saarka ee xawaaraha ah, oo ay xitaa ka sii fiicnaadaan, dabacsanaan badan iyo awoodo badan oo ku saabsan boorsadaada daabacaadda iyo qurxinta khiyaamadaada. Waxay si xoog leh kuu shaqeysaa, sidaa darteed waad ku adkaan kartaa sii kordhaya ganacsigaaga oo aad ku xirnaato suuqyo cusub.
Shiinaha ayaa diirada saaraya UV DTF Hot Stamping Trumpans Randers-ka - diirada saar Inc.
Waxaa jira waqtiyo ay tahay inaad qaadato daabacaaddaada xayeysiinta ah oo ah mid soo jiidasho leh. Had iyo jeer, waxa shey daabacan runtii u baahan yahay waa racfaan gaar ah oo qaababka daabacaadda dhaqameedku mararka qaarkood ay dhiman karaan. Dhameystir macdan ah oo ku saabsan guryahaaga daabacan ayaa siin kara iyaga 'mid aan loo baahnayn' midnimadu 'iyo suuxinta ayaa looga baahan yahay inay saameyn ku yeeshaan. Kaliya ma aha in alaabadaani ay u muuqdaan kuwo wanaagsan, waxay sidoo kale gaadhsiiyaan dareen ah fasalka iyo tayada.Waxaa jira laba qaab oo aad u isticmaali karto dhameystirka macdan ee badeecadaada daabacan - shaabad-tiil-makiinadda iyo daabacaadda metallic-ka. In kasta oo labadooda farsamooyinkan loo adeegsado in lagu wanaajiyo suuxeeyaha oo ay ku siiyaan dhalaalaya dhalaalaya daabacadahaaga, wax badan ayey ku kala duwan yihiin, geedi socodka iyo natiijada ugu dambeysa.Shaashadda 'Metallic Fool', maadaama magacu soo jeediyo, waa habka loo muujiyo foil ku yaal saamigaada kuleylka iyo cadaadiska. Si loo dhigo si fudud, waxay ka dhigan tahay ku dhejinta foil dusha sare ee xulashadaada taas oo aan kaliya siineynin muuqaal gaar ah, laakiin sidoo kale qaab dhismeedka.Dhanka kale, daabacaadda macdanta metallitic waa geedi socod gabi ahaanba kala duwan. Waxay u isticmaashaa nooc gaar ah oo khad ah oo lagu qaso walxaha dhabta ah ee dhabta ah, taasoo siisa muuqaal dhalaalaya oo macdan ah. Qeybta ayaa marka hore loo isticmaalaa habka daabacaadda, laakiin si loo helo saameynta la doonayo, waxay u baahan kartaa jubbado xigta sidoo kale.
Focus saarka A3 DTF printer cusub laba madax print EPSON F1080 habka daabacaadda!
Focus Inc. Digital Technology Co., Ltd.waxaa la aasaasey sanadkii Shanghai, Shiinaha, waa kan soo saaraha ah in R&D, UV ugu fiican iyo printer DTG iman kara digital flatbed printer, calaamadaha&waxyaabaha adverting. Iyadoo 17 sano oo waayo aragnimo ah, waxaan awood u leeyihiin in ay wax soo saarka oo dhan at taageero macquul ah qiimaha iyo-waqtiga dhabta ah caatada dul our line-soo-saarka gaar ah, injineerada xirfadeed, qaybo adag iibsiga channel iyo tallaabo masuul ka altitudinal.Hadafkeenu waa in la sameeyo xalka ugu fiican warshadaha ee daabacaadda caalamiga ah!Ku soo dhowow si ay u booqdaan shirkadda iyo nala soo xiriir.Waxaan sugeynaa idiin! :)
Diiji daabacaadda UV ee kubbadda golfka! Shirkad qaybiya& Soo-saareyaasha | Diirada saar Inc.
Ku daabac qoryaha, birta, balaastikada, dhoobada, abrylic, dhalada, maqaarka, dhagaxa, dhagaxa iyo wax badan oo lagu daabaco daabacaadda UV ee loo habeeyay ee diiradda la saarayo Inc.! Iyada oo ay toos u toos tahay substrate oo toos u ah shayga daabacaadda, waxaad heli doontaa dabacsanaan loo baahan yahay si aad ugu daabacdo naqshadaha dhaqaalaha ee badeecado kala duwan - si dhakhso ah oo fudud. Waxaa sii dheer, indhooleyaasheena UV ay la socdaan adeeg macaamiisha oo aad u wanaagsan iyo softiweer, sidaa darteed waad nasan kartaa inaad ogtahay in kooxdaadu ay heli doonto tababarka iyo taageerada ay u baahan yihiin in wax soo saarku si habsami leh u sii wado si habsami leh.
Si loo badbaadiyo wakhtiga iyo tamarta macmiilka, waxaanu bixinaa adeegga "HAL JOOJIN" oo ay ku jiraan diiwaanka xarunta wac, Su'aal u baahan, Maareynta dhibaatada, Online ogaanshaha, Spare parts raritaanka iyo soo celinta.Our maaraynta falsafada:Mutual faa'iido, Innovation iyo Humanization. Hadafkayaga kama dambaysta ah: Ku qanci baahida suuqa; Bixi xalka ugu fiican ee macaamilka, dhammaan waxaan ku sameyneynaa, dhammaan adiga. Adeeggayaga: ka gudub rabitaankaaga, inaad noqoto shirkad Adeeg Kordhin ah. Aaminaadayada iyo daacadnimadayada: Kalsoonida iyo masuuliyadda shakhsi ahaaneed ee dhammaan cilaaqaadka.
Si loo badbaadiyo wakhtiga iyo tamarta macmiilka, waxaanu bixinaa adeega "HAL JOOJI" oo ay ku jiraan diiwaanka xarunta wac, su'aal u baahan, dhibaato xalinta, Online ogaanshaha, Spare parts raritaanka iyo soo celinta soo celinta.
Faa'iidada wadaagga ah, hal-abuurka iyo bani'aadamnimada.
Ku qanci baahida suuqa; sii xalka ugu fiican macmiilka, dhammaan waxaan samaynaa, dhammaan adiga.
Ka gudub rabitaankaaga, inaad noqoto shirkad Adeegga Kordhinta.
Kalsoonideena Iyo Daacadnimadayada
Kalsoonida iyo masuuliyadda shakhsi ahaaneed ee dhammaan cilaaqaadka.
Focus Digital Technology Co., Ltd (Hubinta diwaangelinta khadka tooska ah). waxaa lagu dhisay Shanghai, Shiinaha. Waa kee soo saaraha si uu u abuuro oo u soo saaro sida ugu fiican uguna macquulsan DTG si toos ah daabacaha dharka, digital LED-UV printer flatbed, machine pretreatment machine, CTS computer to screen imaging system, calamadaha&u xayaysiinta alaabta macaamiisha. Waxaan dul saarnaynay xalka U-Diyaarinta-Daabacaadda. Waxaan diiradda saarnay goobtan daabacaadda dhijitaalka ah muddo 17 sano ah. Waxaan ku siin dhammaan badeecooyinka qiimo macquul ah iyo taageerada waqtiga-dhabta ah ku tiirsan line-soo-saarka noo gaar ah, waayo-aragnimo xirfadeed, qaybo adag iibsiga channel iyo tallaabo mas'uuliyadda sare, waxaan diiradda saarayaa suuqa si ay u bixiyaan wararkii ugu dambeeyay ee waaweyn iyo abuurista alaabta faa'iido leh, our Kooxda taageerada khibradeed waxay ururiyaan dhammaan farsamada oo ay helaan tababarka ugu cusub waqtigooda si ay u bixiyaan taageerada ugu fiican.
Dhammaan ganacsatadu waxay la kulmi karaan dhibaatooyinkan: Tayo wanaagsan laakiin qiimo sare leh , Qiimaha macquulka ah laakiin adeegga xun, taageero wanaagsan laakiin tayada xun, kharash aan macquul ahayn, ma heli karaan tababarka buuxa, ma heli karaan taageerada wakhtiga dhabta ah, Jawaabta dib loo dhigo sida imtixaanka adag iyo codsi. Dijitaalka diiradda saaraya waa shirkad si ay kuu xalliso dhibaatada noocan oo kale ah adiga ugu badnaan Sideen samaynaa? ---- Xakamaynta tayada "AFAR SILSILADA" adag; Taageerada-waqtiga-dhabta ah "LOG-FOUNDATION-LOG-ON-DIAGNOSIS" Taageerada; Adeegga "HAL JOOJIN" Waxaan tixraacnaa si adag " Afar Silsilad (Material Control Department-Assemble line control-QC Department control-control Department control ") nidaamka xakamaynta tayada si loo hubiyo in dhammaan alaabtu ay sax yihiin ka hor intaan la keenin, Laakiin ma jiraan wax alaab ah 100 % qumman,Waqtiga dhabta ah iyo taageerada waxtarka leh ayaa ah kuwa ugu muhiimsan, macmiilku wuxuu heli karaa taageerada waxtarka leh ee waqtiga-dhabta ah taageeradayada INTERNETKA ah iyo TAAGEERADA-DEEGAANKA-DEEGAANKA si aan u hubinno in dhammaan dhibaatooyinka iyo su'aalaha si dhakhso ah loo xalliyo. Sidoo kale waxaan soo aruurineynaa dhammaan dhibaatooyinka si aan u sameyno sida dukumeentiyada xalka, si macaamiishu uu si degdeg ah ugala soo bixi karo ftp-yadayada.
Waxaan diiradda saarnay goobtan daabacaadda dhijitaalka ah muddo 17 sano ah.
Dalka / Gobolka
Shiinaha Sidee u qaybiyaa Tartanka Hindi ee UV iyo Printer-ka Dtg ee Shiinaha? Soo-saareyaasha - diirada saar Inc.
Wakiilka adduunka ee la doonayoFeejignow Inc. waxay raadineysaa wakiilo caalami ah iyo qaybiyeyaal adduunka oo dhan.Qof kasta oo xiiseeya oo kalsooni ku qaba inuu noqdo wakiilkayaga, fadlan la xiriir ilkaha ku xeel dheer info@focasij.com
Kartida La-tashiga Macaamiisha& Soo-saareyaasha | Diirada saar Inc.
Shaqo wanaagsan oo ka socota macaamiisha xallinta, iyagu waa kuwo aad u xirfadeed badan, ganacsigu si wanaagsan oo ka sii wanaagsan.Kaalay oo la shaqee diiradda aan u leenahay Inc., wax badan oo ku saabsan daabacadaha, wax badan ka ogaato suuqa oo aad wax fiican u soo bandhigto suuqa.
Macaamiisha waxay booqdaan xafiiska xallinta iyo warshadda
Ilaalinta waqtiga macaamiisha, waxaan bixinaa adeegga "hal joogsi" oo ay kujirto diiwaanka xarunta wicitaanka, su'aasha loo baahan yahay, baaritaanka dhibaatada, ogaanshaha qaadka, qaybo ka mid ah dhoofinta iyo soo celinta gudbinta.Falsafadeena maaraynta: waxtarka labada dhinac, hal-abuurka iyo aadanaha.Hadafkayaga ugu dambeeya: qancin baahida suuqa; Sii xalka ugu fiican ee macaamilka, dhammaanteen aan adiga ku qabanno, oo dhan.TENTETENTE TENT: Ogjiso rabitaankaaga, inaad ahaato shirkad adeeg kor-u-kordhin ah.Maxdeedka aaminka iyo sharafta: aaminaada: aaminaad iyo masuuliyada shaqsiyeed ee cilaaqaadka oo dhan.
Codka Macaamiisha ee daabacayaasha DTG ee daabacayaasha Athena Pre Mot Marka lagu daro diiradda Inc.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in badeecadeena ay ka caawiyaan macaamiisha inay ogaadaan fikradooda iyo qorshayaashooda. Haddii aad rabto inaad daawato fiidiyowga, waxaad ka heli kartaa dhiirrigelin ganacsi oo fiidiyowga ah.